Day दिन इन्टरनेटबाट हरायो Martech Zone
आइतवार, जनवरी २,, २०१। मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
बुधवार साँझ देखि, यो बस्न र वास्तवमा मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्षम भएको यो पहिलो पटक हो। बिहीबार मेरो ज्वरो शुरू भयो र अर्को hours 48 घण्टा मेरो शरीरबाट हिंस्रक ढंगले निकालिए जाँदै थिए कि थप तरल पदार्थलाई कायम राख्न कोशिस गर्ने एक कार्य प्याक रेस थियो।
मलाई लाग्छ एक महिना लाग्यो:
Feed,3,967। अपठित फिडहरू मेरो फिड रिडरमा।
मेरो व्यक्तिगत इनबक्समा २242२ ईमेलहरू।
मेरो काम ईनबक्समा email 73 ईमेलहरू।
२२ निमन्त्रणा, friend साथी अनुरोध र फेसबुक मा २ 22 इनबक्स आईटमहरू।
Mobile भ्वाइसमेलहरू मेरो मोबाइल फोनमा।
मेरो कामको फोनमा २ भ्वाइसमेलहरू।
१ वर्षौं पहिले काम गरेको कम्पनीको अध्यक्षको साथ १ घण्टा खुसी भयो।
धेरै मान्छेहरूले वास्तवमै आश्चर्यचकित हुन्छन् कि कसैले कसरी यी सबैलाई समात्न र सामाजिक मिडियाबाट क्यारियर बनाउँदछ। Days दिनको गति र स्थिरता गुमाउँदा यसले पर्यटकहरूको समग्र संख्या, मसँग भएका ग्राहकहरूको स ,्ख्या, र मलाई पछ्याउने ट्विटरहरूको संख्यामा पनि असर पर्नेछ - ती नम्बरहरूलाई फेरि आकारमा लिनको लागि हप्ता लाग्न सक्दछ।
यो धेरै कठिन मान्छेले सोचेको भन्दा बढी गाह्रो छ ... सायद मैले सोचे भन्दा पनि बढि! मलाई मान्छेहरू द्वारा दु: खी क्रोधित फोनहरू आएका थिए उनीहरूले मलाई पक्रन सक्तैनन् भन्दै कुनै पनि मध्यम ओह, म मेरो बाथरूममा टेलीकॉन्फ्रन्सेन् had गर्न चाहन्छु।
के तिनीहरू आश्चर्यचकित भएनन्?
Users.२3.24% फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू मरेका छन्
जनवरी १, २०१ 25 १२::2009 अपराह्न
तपाईं जीवितको देशमा फर्केर खुशी हुनुहुन्छ। र "धन्यबाद!" त्यो टेलि-कन्फरेन्सिंग विचारमा। त्यो एक फिड हो जुन सँधै अँध्यारो रहन सक्छ!
यो राम्रोसँग तपाईले बाथरूमको अर्को पट्टि बनाउनु भएको देख्नु भयो - त्यसो भएमा।
म कल्पना गर्दछु कि तपाईले निर्माण गर्नुभयो यो समय बढि समय भन्दा पहिले नै द्रुत झोला को लागी पनी गएको काठीमा निर्धारण गर्दछ।
तपाईं म्यान्डमा हुनुहुन्न भने सुन्न पाउँदा खुशी छु। 🙂
धेरै इलेक्ट्रोनिक leashes बाट untethered हुन यो एक आशिष् गणना। फ्ल्याशिंग सचेतहरूको भूमिमा पुन: स्वागत छ, बीपिंग सेल फोनहरू, ननस्टप ट्वीटहरू, र लुमिंग डेडलाइनहरू। फिर्ता आउनु भएकोमा स्वागत छ।
म टेलिकोनफेरेन्सीमा बीएनपीएसिटिभको प्रस्तावलाई दोस्रो गर्नेछु।
तपाईंसँग दैनिक रूपमा काम गर्ने कामको मात्राको लागि मलाई नयाँ प्रशंसा छ। राम्रो भाग्य समातेर, आशा छ तपाई अझ राम्रो हुनुहुन्छ।
जनवरी 26, 2009 मा 8: 55 एएम
र अब तपाईं आफ्नो सूचीमा थप्न सक्नुहुन्छ "यस ब्लग पोष्टको बारेमा4टिप्पणीहरू"। आशा छ तपाईले राम्रो महसुस गरिरहनु भएको छ!